Dielectrical voltage bvunzo mumvura - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Dielectrical voltage bvunzo mumvura inonzi imwe pasi pemvura yemagetsi kuchembera bvunzo kuyera kuvimbika nekubatana kwetambo kuboora zvinongedzo zvine yakaderera, yepakati uye yakakwira magetsi mumvura. Isu tinoenderera bvunzo iyi pane yakaderera magetsi insulated kuboora zvinobatanidza, akaisirwa waya tambo uye akasungirwa magumo makapu.
Muedzo uyu unofanidza mamiriro ekunze ekuti kunoramba kuchinaya uye kwakanyanya mwando. Isu tinoisa akafukidzwa makondakita mutangi inoonekera ine huwandu hwakaringana hwemvura, ndokumisa yakakwira voltage uye kuyera kubatanidza. Chiyero chemagetsi uye nguva zvine zviyero zvakasiyana zvinoenderana nematanho EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 yemagetsi ekuparadzira zvishongedzo. Kuburikidza neyekuenzanisa bvunzo kuona yakakwira nhanho yekudzivirira kweanobatanidza magetsi pasi pemagetsi, mitoro yemagetsi, inoteedzera nguva yekushandisa.
Yedu bvunzo chiyero chakavakirwa paCENELEC, N 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 uye isu tinoshandisa zvinotevera zviyero bvunzo pazvinhu zvitsva usati watanga, zvakare neyemazuva ese kudzora mhando, kuitira kuve nechokwadi chedu mutengi anogona kugamuchira zvigadzirwa zvinosangana nemhando yepamusoro zvinodiwa.